Soogalooti Hanjabaad loo Geeystey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soogalooti Hanjabaad loo Geeystey
La daabacay torsdag 3 november 2011 kl 13.30
Soogalooti loogu hanjabay dil
foto: SR International
Boqolaal ruux ee dalkan ku heley xeerka deggenaansho ayaa go'aannadoodii iyo sababihii ey maxkamadaha socdaalku ugu ogolaaden sharciga deggenaansho la soo dibad dhigay, kuwaasina oo lagu soo daabacay
Internet-ka. Qoraallada internetka lagu soo daabaco ayey ka mid yihiin war-bixinno xasaasiya, iyadoona aaney illaa hadda caddeyn in wakiilka boggaasi uu xeerka jebiyey iyo in kale. Halka wiil aan ugu magac-darnay Cali oo dhammaan waxyaabihii uu kula hadlay hayadda socdaalka dibadda laga daalacan karo.
Islamarkaana dadkii u hanjabay ee netka ka akhristay qoraalladiisii ay ku amreen inuu soomaaliya dib ugu soo laabto. Cali oo aannu khadka telefoonka ku gaarnay isaga oo ku sugan xarun ciidanka ammaanka sidii uu dacwad uga gudbin lahaa middaa:
- Hayadda socdaalka ayaa u ballan-qaadda kolka ey saraakiishoodu wareysi la yeelanayaan ruux magan-gelyo doon ah in waxyaabaha laga ogaado ama uu ruuxaasi sheegaa aaney halka lagu wareeysanayo dhaafi doonin.
Abuukar Xaamud Sayid wuxuu sannadihii ugu dambeeyey ku howl-galayay xirfadda tarjubaannimo, isagoona nooga warramay sida howlahaasi u dhacaan kolka ruux magan-gelyo doon ahi la kulmo saraakiisha hayadda socdaalka:
Hase yeeshee bogga Internet-ka ee lagu magacaabo Migileaks oo uu soo daabaco qoraallo furan ee laga soo qaatay maxkamadda socdaalka uuna ugu magac-daray "xatooyadu iney joogsato". Halka uu tifatiraha boggaasina Henrik Agerhäll, ahna xubin ka tirsan xisbiga ku caan baxay ajnabi naceeybka ee Sverige-dimoqoraadigu uu diiday inuu wareeysi siiyo idaacadda caalamiga ah ee raadiyaha Iswiidhen, balse qoraal u noo soo gudbiyay ku sheegay in micnaha ka dambeeya daabacaadahaasi yihiin "sidii bulshadu fikir uga qaadan lahayd sababaha lagu siiyo soo-galootiga xeerka deggenaanshaha.
Kolka uu ruuxu diidmo ka helo hayadda socdaalka dabadeedna u qaato abiill maxkamadda socdaalka ayaa sida xeerka dalka u degsani qorayaa in war-bixinnada maxkamadduhu yihiin kuwo furan oo ruuxii doonaaba dalban karo kiiskaa, inkastoo su'aasha is-weeydiinta lihi tahay in daabacaadahani jebineyaan xeerka ilaalinta war-bixinta shakhsiga hagana waxyaabaha laga daabici karo ruux iyo waxyaabaha aan laga daabici karin. Waana arrin aaney hayadda kormeerka daabacaaddu weli go'aan ka gaarin, sida uu sheegay Jonas Angvall, ahna gar-yaqaan ka howl-gla hayaddaa:
- Waa xaalad cusub, iyadoona mar walba oo ay soo baxdo xalad aan hore u dhici jirin loo baahan yahay in xeerka dib loo eego iyo heerka qoraalladaasi xeerka u jebineyaan iyo in kale. Waxaan eegi doonnaa fikirka ka dambeeya daabacaadda haddii ey u muuqan karaan kuwo meel ka dhac ah iyo iney jiraan fikirro suxufinimo ee ka dambeeya.
Haddii hayaddu u aragto in daabacaaddu fikirro suxufinimo salka ku hayso waa mid la fasaxay, xitaa haddii shakhsiga meel looga dhacayo.
Halka ey dhanka kale haba-yaraatee aaney waxba ka qaban karin go’aanka maxkammadaha qaabka loo isticmaalo. Iyada oo go’aammada maxkammaduhuna yihiin kuwo bulshada u furan. Peter Enander, madaxa maxkamadda socdaalka ee Istockholm:
- Wax fikir ah kama qabo sababta ka dambeeysa in go’aammadayadu dibadda yaalaan iyo iney falalkaasi saameeyn ku yeelan karaan howlaha maxkamadda.
Cali faalooyinkiisii oo dhammi dibadda ayey yaalaan, looguna hanjabay isaga iyo xaaskiisaba in la dhibaateeyn doono war-bixinnadii uu hayadda socdaalka u sheegay daraadood ayuu argagaxay kolkii uu arkay, isagoona inta gaari uu lahaa la qaatay, kadib kolkii dib loogu soo celiyay inta la soo wacay loo sheegay in iyagu ahaayeen ciddaa ka dambeeysey. oo noo sheegay inuu argagax galay kuna tala jiro iney qaxii halkoodii ka sii wadaan maadaama ammaankoodu halisk u jiro.
Iyo ugu dambeeyntii Jonas Angvall kana howl-gala hayadda kormeerka daabacaadda ayaa ku waaniyay in xitaa haddii ay hayadda uu ka howl-galaa go’aan ku gaarto in aannu boggaa internrtku xeer jebin, misna haddii uu dareemo ama dareemayo shakhsigu meel kaga dhac uu dacwad uga gudbiyo ciidanka ammaanka: